Robot cusub ayaa soo galay Fukushima reactor 1 | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tamarta nukliyeerka
Warshadda tamarta nukliyeerka ee Fukushima ayaa ah mid aan xasilloonayn sababo la xiriira heerarka sare ee shucaaca ku jira falanqeeyayaasha. Si loo hubiyo xaaladda soo-saareyaasha, hawlwadeenku wuxuu go'aansaday inuu soo saaro robot cusub si uu u hubiyo heerarka shucaaca ee gudaha ku jira isla markaana u qiimeeyo xaaladda joojinta mustaqbalka.
Robot-kii ugu dambeeyay ee baaray gudaha reakooyinka waxaa lagu burburiyey shucaac heerkiisu sareeyo. Si kastaba ha noqotee, qalabkani waa ka sii diyaarsan yahay ama sidaa darteed waxay umuuqataa. Waa sidee xaaladda kiciyayaashu?
Robot cusub oo lagu baaro Fukushima
Aaladda loo adeegsaday baaritaanka reakooyinka waa mid iskeed u shaqeysa waxaana ku shaqeeya kontoroolka fog. Waxay ku qalabeeyeen kaamirooyin fiidiyow ah, heerkulbeeg iyo cabbiraad si ay awood ugu yeeshaan inay duubaan heerarka shucaaca iyo heerkulka ay ku sugan yihiin.
Shirkadda mas'uulka ka ah robot-ka cilmi-baarista ayaa ah TEPCO (Shirkadda Korontada Tokyo). Xogta iyo sawirrada ay ka soo saari karaan fir-fircooniga, waxay awood u yeelan doonaan inay ogaadaan jiritaanka shidaal la shubay oo awooday inuu kala sooco xudunta u-fal-celinta ilaa markabka xakamaynta. Midkoodna weli lama xaqiijin maxaa yeelay heerarka shucaaca ayaa aad u sarreeya oo qof ku dilaya daqiiqado gudahood.
Xaaladaha ku dhex jira fal-falka waa in la qiimeeyaa si loo qorsheeyo ka saarista shidaalka. In kasta oo hawshani caqabad ku tahay heerarka dilaaga ah ee shucaaca ee wadnaha xarumaha nukliyeerka.
TEPCO waxay horey u soo bandhigtay labo aalado oo ah cutubka 1 ee warshadda, laakiin labadaba waa laga tagay gudaha ka dib markii kii ugu horreeyay uu ku dhegay kan labaadna waxaa loo rogay shucaac aad u sarreeya.
Rakabiyaasha 1,2, 3 iyo 2011 ee warshadda Fukushima waxaa ku dhacay burburka qayb ka mid ah xuduntooda intii lagu jiray musiibadii Maarso XNUMX. Taasi waa sababta ay muhiimad weyn u leedahay in la ogaado xaaladda ulaha shucaaca shucaaca si looga saaro oo looga bilaabo burburinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta Caadiga ah » Tamarta nukliyeerka » Robot cusub ayaa soo galaya Fukushima reactor 1